Xaaladu Way Sii Xumaatay, PFA Oo Dawlada UK Ka Dalbaday In Daraasad Dhab Ah Lagu Sameeyo Saamaynta Karoonaha Ee Ciyaartoyda Madowga Ah. - Gool24.Net
Xaaladu Way Sii Xumaatay, PFA Oo Dawlada UK Ka Dalbaday In Daraasad Dhab Ah Lagu Sameeyo Saamaynta Karoonaha Ee Ciyaartoyda Madowga Ah.
23/05/2020 Mahamoud Batalaale
Xidhiidhka xirfadlayaasha kubbada cagta England ee Professional Footballers Association(PFA) ayaa dawlada UK ka codsaday in ay daraasad rasmi ah ku sameeyaan saamaynta cudurka Koroona ku leeyahay ciyaartoyda madawga ah, kuwa Asia ka yimid iyo kuwa laga tirada badan yahay oo loo soo gaabiyo BAME.
Codsiga PFA ee in baadhitaan lagu sameeyo saamaynta dhabta ah ee fayraskani ku yeeshay ciyaartoyda madawga ah ayaa soo baxday laba maalmood kadib markii xidiga kooxda Chelsea ee N’Golo Kante gabi ahaanba laga fasaxay tababarka kooxdiisa Chelsea.
Inkasta oo N’Golo Kante uu maalintii ugu horaysay ee tababarka Chelsea uu soo xaadiray waxa uu dareemay cabsi gaar ah isaga oo muujiyay in aanu diyaar u ahayn in uu sii wato tababarka taas oo keentay in maamulka Chelsea ay xidiga reer France ku taageereen in uu tababarka ka maqnaado muddo aan la cayimin.
Dhinaca kale kabtanka kooxda Watford ee Troy Deeney ayaa gabi ahaanba diiday in uu ka soo xaadiro tababarka kooxdiisa Watford waxaana sidoo kale jira xidigo badan oo madaw ah oo lagu cabsi galiyay daraasad hore oo UK laga soo saaray.
Tababaraha kooxda Watford ee Nigel Pearson ayaa cadho wayn ka muujiyay in lix ciyaartoy oo kooxdiisa ahi ay ka soo xaadiri waayeen tababarka wuxuuna ku tilmaamay in ay kooxdiisa cadaalad daro wayn ku tahay in xili ciyaareedka dib loo bilaabo xaalada oo sidan ah.
Madaxa fulinta ururka xirfadlayaasha kubbada cagta England ee PFA oo magiciisa la yidhaa Bobby Barnes ayaa dawlada UK ka codsaday in baadhitaan rasmi ah iyo daraasad lagu sameeyo saamaynta caabuqa Karoonuhu ku yeeshay ciyaartoyda madawga ah, kuwa Asia ka yimid iyo kuwa laga tirada badan yahay.
Bobby Barnes ayaa la hadlay waaxda dhaqanka, saxaafada iyo Sportska UK wuxuuna u sheegay in ay ka walwalsan ihiin xaalada ciyaartoyda madawga ah isla markaana ay u baahan yihiin in la sameeyo daraasad cusub haddii Fayraskani uu saamayn gaar ah ku yeelanayo ciyaartoydan.
Xafiiska statikiska iyo xogta UK ayaa hore u shaaciyay daraasad ay ku sameeyeen dadka madawga, Asia iyo kuwa laga tirada badan yahay waxaana daraasada hore lagu sheegay in dadkani yihiin kuwa ugu nugul ee uu dhibaatada ugu badan u gaystay faraysku.
Waxay natiijada daraasadaasi keentay in ciyaartoy badan oo Premier League ka ciyaara oo madaw ahi ay cabsidii ugu waynayd ka qabaan in haddii ay garoomada ku soo laabtaan ay naftoodu halis ku jirto.
Goolhayaha kooxda Chelsea ee Tammy Abraham ayaa todobaadkii hore sheegay in uu u cabsanayo aabihii uu leh cudurka xiiqda ee ku dhaca neef mareen kaas oo ah xanuunada dadka qabaa ay inta ugu badan u nugul yihiin karoonaha.
Laakiin N’Golo Kante ayaa noqday xidiga ugu saamaynta badan ee cabsida uu ka qaaday fayraskan iyo soo laabashada Premier League ay hadda keentay in PFA uu dawlada UK ka dalbaday in baadhitaan iyo daraasad rasmi ah la sameeyo.
Xidiga reer England ee Danny Rose ayaa dhawaan sheegay in ku soo laabashada lagu qasbayo kulamada Premier leauge ay la mid tahay sidii in loola dhaqmayo in ay yihiin jiirarka ama dooliga laababka baadhitaanka daawooyinka lagu tijaabiyo ama ay yihiin doofaaro oo kale.
Laakiin waxaa jira ciyaartoy badan oo madaw ah ama Asia ka so jeeda oo haddaba si aan walwal lahayn ugu soo laabtay xarumaha tababarka kooxahooda balse walwalka ayaa noqday mid sii badanaya.
Dhinaca kale waxaa jira olole ay wadaan maamulka premier league iyo PFA oo la doonayo in ciyaartoyda Premeir league looga caawiyo in go’doonkii farayskani iyo walwalka laga qabaa aanu ciyaartoyda qaar maskaxdooda dhaawicin.